6 Fure u ah Guusha Adeegga Macaamiisha Adeegsiga Baraha Bulshada | Martech Zone
Waan wadaagnay tirakoobka ku saabsan koritaanka adeegga macaamiisha iyadoo la adeegsanayo warbaahinta bulshada, iyo xogtan xogtani waxay ku qaadaneysaa xoogaa dheeraad ah, iyadoo la siinayo 6 fure oo kala duwan oo shirkaddaada ay ku dareyso si loo xaqiijiyo guusha. Adeegga macaamiisha ee Lousy wuxuu khalkhal gelin karaa suuqgeyntaada, sidaa darteed waxay muhiim u tahay suuqleyda inay kormeeraan dareenka iyo waqtiga jawaab celinta iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada.
Mid ka mid ah sahanka JD Power ee ka badan 23,000 macaamiisha internetka, 67% jawaabeyaasha ayaa soo sheegay inay la xiriireen shirkad iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada si ay u taageeraan. Si kastaba ha noqotee, joogitaanka warbaahinta bulshada oo keliya kuma filna. Si si wax ku ool ah looga faa'iideysto, ganacsigu waa inuu ka taxaddaraa sida ay wax u dhageysanayaan, iyo ka sii muhiimsan, sida ay uga jawaabaan. Bixinta Caalamiga
Waa kuwan furayaasha 6, oo ah qaab jaantus ah Tilmaamaha ugu sareeya ee looga faa’iideysto Baraha Bulshada ee Adeegga Macaamiisha, laga helo Global Outsourcing:
Xulo Kuwa Ugu Fiican Baraha Bulshada taas oo ku habboon Baahiyahaaga Ganacsi - waxaan u nahay danjire Agorapulse taas oo aan aad ugula talin lahaa urur kasta oo weyn iyo yarba. Barxadku wuxuu soo bandhigayaa isdhexgalkaaga waxbadan sida sanduuqa, oo u saamaxaya shirkadaha inay ka jawaabaan ama u igmadaan ka jawaabista arrimaha si wax ku ool ah.
La soco Hadalada Bulshada - macaamiisha iyo rajadu waxay kugu xusi doonaan baraha bulshada iyaga oo aan ku calaamadin ama toos kuula hadlin. Waa lagama maarmaan inaad ka faa'iideysato barxad lagugu digin karo markii laguu sheego inaad ka horreyso arrimaha adeegga macaamiisha. Tani waa muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah Agorapulse, habka.
Isticmaal Midigta saxda ah ee Codka si isdaba joog ah - jawaabaha xasaasiga ah had iyo jeer sifiican looma turjumi karo qadka, marka hubi inaad la jaanqaadi karto jawaabtaada codsiga la sameynayo. Kooxdaadu waxay u baahan tahay inay daryeesho… oo ay u ekaato sida ay u daneynayaan you markaa adigu kuma imaan doontid baaritaan dheeraad ah ama dhaleeceyn uga imaaneysa shabakadda bulshada ee shaqsiga.
Xusuuso Samee iyo Ha u Baahan Warbaahinta Bulshada - ha iloobin, tirtirin ama ha qarin faallooyinka, ha noqon wax isdifaac ah, ha ku mashquulin trolls, ama ha ku buuxin macaamiishaada macluumaad aad u badan. U mahadnaq iyaga oo arrinta u soo gudbiyay dareenkaaga, qiraya tabashadooda, kana raalli noqo dhibaatada. Inta badan oo dhan, hubi inaad ku heli karto qaraar ka farxiya macmiilka.
Samee Isticmaal a Base aqoonta - 91% macaamiisha internetka waxay yiraahdeen waxay isticmaali lahaayeen saldhig aqoon oo isku mid ah haddii la heli karo oo loogu talagalay baahidooda Saldhigga Aqoonta ayaa hoos u dhigi kara tigidhada taageerada, natiijooyinka si dhakhso leh u keenaya, macaamiishana ku farxi kara.
Baro Goorma Qaadashada Khadka Tooska ah - kulan dadweyne sida warbaahinta bulshada ayaa laga yaabaa inuusan aheyn meesha ugu fiican ee macaamiisha kacsan iyo dhibaatooyinka kakan. Maaha wax aan caadi ahayn in macmiil laga codsado inuu ku raaco, kula xiriiro iyaga toosna farriin, ugana wareeji wadahadalka khadka tooska ah taleefan ama fool-ka-fool halkaas oo aad uga caawin karto si hufan.
Tags: Adeegga macaamiishaadeegga macaamiisha infographicguuleysiga adeegga macaamiishabixinta caalamigainfographicwarbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographic
Mustaqbalka Is-qandaraasyada Is-adeegsiga Isticmaalka Blockchain